Libanona: Fihetseham-po Samihafa Taoriana Ny Fipoahana Tao Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2012 3:51 GMT
Namoy ny ainy ilay Minisitra Lefitra Syriana ao amin’ny Minisiteran’ny Fiarovana, Assef Shawkat sy ireo mpiasa-panjakana ambony ao amin’ny fiadidian’i Bashar Al Assad noho ny fipoahana niseho androany tao Damaskosy. Araka ny mahazatra, nisy fiantraikany mivantana tao Libanona ny fipoahana.
Tao Avaratr'i Liban, ao Tripoli no niatombohan'ny loza, raha nanokatra ny fankalazana izany (fipoahana) tamin’ny alalan'ny tifitra variraraka ny mponina Bab al Tabbaneh mpanohitra ny fitondran’I Bashar. Araka ny voalazan’ny tranonkala Naharnet, olona iray no namoy ny ainy vokatry ny bala very. Naratra ihany koa ny ankizy iray mpifanolo-bodirindrina ao Alawite Jabal Mohsen. Nahatonga ny tafika hiparitaka eny amin’ny faritra ny zava-niseho mba hisorohana ny fiitaran’ny toe-draharaha. Nibahana teo amin’ireo mpiserasera Libaney ihany koa ny vaovao
Dibo-kafaliana i Muslema, avy ao Tripoli:
Mponina ao Tripoli avokoa ireo Arabo tena faly aorian'ny Syriana. Chaar no tompon’andraikitra mivantana tamin’ny famonoana an’I Tabbaneh… Tsara, misaora an’Andriamanitra. Manome fotoana izy ka aza adino
Mpanao gazety Sawsan Abou Zahr nankalaza hoe:
Afaka milaza isika fa nahazo ny fahafahany ny vahoaka Libaney androany.
Jihad el Murr, tompon’ny fahitalavitra MTV ao Liban, nizara ny heviny ihany koa:
Toa mahita aho fa manomboka faly sy mitsiky avokoa ireo Martiorantsika any an-danitra 🙂
Sarah Assaf nanontany hoe:
Aiza i Bashar Al Assad amin’izao fotoana izao?
Izy ihany no namaly ny fanontaniany:
Bashar. Aza mandositra. Mijanona amin’izay toerana misy anao. Ho avy hanatona anao izy ireo..
Tezitra kosa ireo hafa noho ny fanehoan-kevitra tamin’ny fahitalavitra Libaney sasany (indrindra ny mpanohana ny Hezbollah, Al Manar). Mpandinika ny raharana politika Hadi El Amine nisioka hoe:
Nilaza ny namana iray: Mampihena ny faharisihan’ny olona ny famaritana ireo namoy ny ainy androany ho toy ny maritiora tamin’ny fahitalavitra Libaney sasany (ho an’ny tompon’ilay fahitalavitra):
Zavatra hafa kosa no toa eritreretin'i Nader Haddad:
Tokony hihevitra indray ny paikady momba ny fifandraisany i Manar & NBN: Tsy tokony harangaranga toy ny martiora i Chawkat.
Nampiasa Twitter ihany koa i Tom Fletcher, Masoivoho Britanika ao Liban, nanehoany ny ahiahiny momba ny fiantraikan'ny fipoahana ao Liban:
Toa miditra amin'ny dingana vaovao i Syria. Tena ilaina ny fihazonan'i Liban ny politikan'ny fampisarahana, ary tokony tohanan'ny fianakaviambe iraisampirenena tanteraka izy.
Imad Atwi, kosa etsy andaniny, olon-kafa mihitsy no hitany fa diso. Hoy izy nisioka:
Alqaida ‪#Qatar‬ ‪#Turkey‬ miaraka amin'ireo mpampihorohoro ao ‪#Syria‬ no namono ireo olonamanankaja ao Syriana. Angamba misy nidiran'ny ‪#KSA‬ (Arabie Saodita) ihany koa
Na dia izany aza, ny tena nandrasana tamin'ny vaovao dia ny kabary holazain'i Hassan Nassrallah, lehiben'i Hezbollah rahariva
Antoun Issa nanoratra hoe:
Naverin”i Hassan Nasrallah nosoratana ny lahateniny, hambara rahariva. Mazava ho azy fa ity no lahateny lehibe indrindra amin'ny krizy ao Syria.
Mpanao politika Libaney Antoine Haddad nisioka hoe:
Anaty toe-java- manahirana i Nasrallah: Ahoana ny fomba hilazany amin'ny kabariny rahariva mikasika ny toe-draharaha mamaivay ao Damaskosy? Fandàvana, fanamelohana sa fanohanana?